Faritra V7V: nomena famatsian-drano sy amboarina ireo Tranobe | NewsMada
Faritra V7V: nomena famatsian-drano sy amboarina ireo Tranobe
Nomena tombony ny farira Vatovavy Fitovinany (V7V) eo amin’ny fandaharanasa sosialy sy toekarena atao amin’ny alalan’ny fampiasana olona maro (Himo). Ny herinandro lasa teo, tonga tany an-toerana ny mpikambana roa ao amin’ny governemanta, ny minisitry ny Vola sy ny tetibola, Andriambololona Vonintsalama, sy ny minisitry ny Fitaterana, Ralava Beboaromisa, mpiahy ny faritra.
Tetikasa iray tanterahin’ny CCPREAS* ny famatsian-drano ao amin’ny distrikan’i Manakara fa iandraiketan’ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola. Nametrahana izany famatsian-drano izany ny ao amin’ny kaominina Sakoana, miisa 20. “Tsy mijanona eo amin’ny tetibola ihany ny asan’ny minisitera fa mitantana ihany koa ho an’ny tombontsoam-bahoaka ho fampandrosoana ny sosialy sy ny toekarena ny minisitera”, hoy ny minisitra Andriambololona Vonintsalama.
Tao amin’ny kaominina Lokomby kosa, nametrahana vato fototra ho fanombohana ny asa fanarenana ireo Tranobe telo. Mirakitra ny kolontsaina sy ny toeram-ponenan’ny mpanjaka tamin’izany fotoana izany ireo Tranobe ireo, may ny volana septambra 2017. Ny Tranobe ao Ampahibe, efa antitra loatra ka mendrika hohavaozina
Sampana iray ao amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola ny CCPREAS, miandraikitra ny lafiny sosialy sy ny toekarena, mampiasa olona maro any amin’ilay toerana hanaovana ny tetikasa. Nandray anjara tamin’ny fitokanana sy ny fanombohana ny asa ireo olom-boafidy any amin’ny faritra.